१० बाइबल पदहरू प्रार्थना गर्न जब तपाईं मुटु टुक्रिनुहुन्छ प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पदहरू १० बाइबल पदहरू प्रार्थना गर्न जब तपाईं मुटु भाँचिनुहुन्छ
१० बाइबल पदहरू प्रार्थना गर्न जब तपाईं मुटु भाँचिनुहुन्छ
आज हामी तपाइँको हृदय टुटेको छ प्रार्थना गर्न 10 बाइबल पदहरू व्यवहार गर्नेछौं। हामी सुरू गर्नु अघि, द्रुत हेराइको मतलब हेरौं। मुटु तोड्ने मनको गलत अवस्था हो जुन निराशा, असफलता, अस्वीकृति र अन्य धेरैको कारण हुन सक्छ। जब एक मानिस मुटु छ, उनीलाइ लाग्दैन कि कुनै कुराले यसलाई ठीक गर्न सक्छ। यद्यपि, हृदयविदारक कत्तिको गहिरो भए पनि, घामलाई निको पार्न परमेश्वरको वचन सधैं हुन्छ।
यद्यपि तपाईको शब्द पढेपछि निम्न पीडा अन्त हुँदैन, तथापि, समयको साथसाथै यो अझ राम्रो हुनेछ र तपाईंको दिमाग यस्तो आरामदायी हुनेछ जस्तो पीडा कहिल्यै भएको थिएन। हामी दस बाइबल पदहरू हाइलाइट गर्नेछौं जसले तपाईको हृदय विच्छेदबाट गुज्रिरहेको बेला सहयोग पुर्‍याउँछ।
यर्मिया 29: 11
“किनभने मलाई तिमीहरूका लागि योजनाहरू छन् भनेर म जान्दछु, 'प्रभुले घोषणा गर्नुभयो,' तिम्रो उन्नति गर्ने छ र तिमीलाई नोक्सानी नदिने, तपाईंलाई आशा र भविष्य दिने योजनाहरू। '
जब तपाई मुटुलाइ हुन्छन् किनभने तपाईले योजना गरेको तरिकाले काम नगरेको छ। चीजहरू अन्य व्यक्तिहरूको लागि धेरै सहज हुँदै गइरहेको हुन सक्छ र अझै तपाई आफैंको लागि कार्य गर्न स .्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो केहि फ्रस्ट्रेसन हुन सक्छ। यदि तपाईं दुःखी हुनुहुन्छ किनभने तपाईं आफ्नो जीवनमा भएको कुनै पनि राम्रो कुराको लागि खाता बनाउन सक्नुहुन्छ, यो पुस्तकको प्रयोग गर्न उत्तम समय हो। यर्मिया २ :29: ११।
यस बाइबलीय खण्डले हामीलाई जानकारीहरू प्रदान गर्दछ जुन हामीलाई चाहिन्छ कि भगवानले हाम्रो लागि योजना बनाउनुभएको छ। यसले भन्छ कि म तपाईंलाई मेरो बारेमा योजनाहरू जान्न जान्दछु, तिनीहरू राम्रोको विचार हो र खराबको विचारहरू होइन जुन तपाईंलाई अपेक्षित अन्त दिनुहुन्छ। त्यसोभए जब सबै चीजहरू काम गरिरहेका हुँदैनन्, जब सबै नराम्रा कुरा तपाईको बिरूद्ध हुन्छन्, सँधै जान्नुहोस् कि परमेश्वरको योजना खडा हुनेछ र जब समय आउँदछ, त्यसले सबै कुरालाई सुन्दर बनाउनेछ।
फिलिप्पी 4: 6--।
“कुनै कुराको लागि चिन्ता नलिनुहोस्, तर हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद र प्रार्थनासहित प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई बिन्ती गर्नुहोस्। र परमेश्वरको शान्ति, जसले सम्पूर्ण समझलाई छोडिदिन्छ, तपाईंको हृदय र दिमागलाई येशू ख्रीष्टमा रक्षा गर्नेछ। ”
हामीले साहस र आश्वासनको स्तर पाउँछौं जुन हामीले परमेश्वरमा आफ्ना कुराहरु विशेष रूपमा प्रार्थनामा लिँदा प्राप्त हुन्छ। यस खण्डमा धर्मशास्त्रले हामीलाई यस खण्डमा कुनै कुराको लागि चिन्ता नगर भनेर बिन्ती गर्दछ, बिन्ती, प्रार्थना र धन्यवादको माध्यमबाट, हामीले हाम्रो अनुरोध परमेश्वरलाई बताउनु पर्छ।
जब हामी हाम्रा समस्याहरू प्रभुको हातमा सुम्पन्छौं, उहाँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ र हामीलाई डो .्याउनुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भगवान्‌ले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ र हाम्रा चुनौतीहरूको सामना गर्न बल दिनुहुनेछ।
मत्ती 11: 28
“थकित र बोझले दबिएका हो! मतिर फर्क, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु।”
यस बाइबल परिच्छेदको प्रयोग गर्नको लागि उत्तम समय भनेको जब तपाईं थाकेका हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहि हामी खतरनाक परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्नेछ जसले हामीलाई थकित तुल्याउन सक्छ। यो यति टास्किंग हुन सक्छ कि बोझले हामीलाई तल्लो बनाउँदछ कि हाम्रो अनुहार अब हाँस्ने छैन।
यो अक्सर हुन्छ जब एक साथ धेरै धेरै अन्योलपूर्ण समस्याहरू हुन्छन्। जब समस्याहरू समाप्त हुँदैन जस्तो देखिन्छ, जब समस्याको समाधान पाउन गाह्रो कुरा हुन्छ, यस बाइबल अंशको अध्ययन गरेर प्रभुसँग शरण लिनुहोस्।
२ कोरिन्थी:: -2-१० “हामी चारैतिरबाट दिक्क भएका छौं तर कुचिएको छैन, अन्योलमा छौं तर निराश छैनौं; सताइए, तर त्यागिएको छैन; प्रहार गरियो, तर नष्ट भएन। हामी सधैं येशूको मृत्युलाई हाम्रो शरीरमा बोक्छौं, ताकि येशूको जीवन हाम्रो शरीरमा पनि प्रकट होस्। ”
यो पढ्नको लागि बाइबल अंश हो जब जीवनले यसको कठिन पक्ष देखाउँदछ। जब यो लाग्छ अरू केहि काम गरीरहेको छैन। जब यस्तो देखिन्छ कि भगवान हाम्रो प्रार्थना सुन्न पनि नजिक छैन। जब हामी बिरामी हुन्छौं वा पीडा भोगिरहेका छौं।
२ कोरिन्थी:: -2-१० ले हामी ख्रीष्टको शरीर बोक्ने बारेमा बताउँदछ। यसको मतलब यो छ कि हामी कुचिएका छौं तर नष्ट भएका छैनौं, यद्यपि दु: ख र पीडा राती सम्म रहन सक्छ, तर खुशी बिहान आउँनेछ।
प्रकाश २१: ““ उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। त्यहाँ मृत्यु, शोक, रुवाइ वा पीडा केही पनि हुनेछैन, किनकि पुरानो कुरा बितिसकेको छ। ”
के तपाईं कुनै खास अवस्थाको कारण रुँदै हुनुहुन्छ? के तपाईंले आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिबाट निराश हुनुभएको छ तपाईंले भर्खरै आफूले माया गरेको व्यक्ति हराउनुभयो। यदि तपाई आफूले ख्याल राख्नु भएको व्यक्तिको हराउने र मृत्युको चिसो हातहरु लाई माया गर्न डराउनुहुन्छ भने पनि, यो समय परमेश्वरको वचनबाट बल खोज्ने हो।
प्रकाश २१: ले बताउँछ कि परमेश्वरले हाम्रो अनुहारबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। त्यहाँ अब मृत्यु वा शोक हुनेछैन। यो हामीमा प्रभुमा भएको आश्वासन हो।
भजन: 46: १-२ "परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र बल हुनुहुन्छ, स trouble्कटमा सदैव सहयोगी। त्यसकारण हामी डराउँदैनौं, यद्यपि पृथ्वीले बाटोहरू र पहाडहरू समुद्रको मुटुमा खस्छ। ”
भजन: 46: १-२ गाह्रो परिस्थितिमा बलको लागि पढ्नको लागि उत्तम अंश हो। जब तपाईलाई कुनै खास चुनौतिहरुमा नराम्ररी मद्दत चाहिन्छ, धर्मशास्त्रले भन्छ, खाँचोको क्षणमा परमेश्वर नै हाम्रो वर्तमान सहायता हुनुहुन्छ।
तपाईंसँग रातमा उडेर आउने आतंकसँग किन डराउनुपर्दछ जब तपाईंसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? प्रभुमा भरोसा राख्नुहोस् र उहाँले तपाईंलाई सबै खराबीबाट जोगाउनुहुनेछ। उसले तिम्रो अनुहारबाट आँसु पुछिदिनेछ।
भजन १ 147: “" उहाँ टुटेका हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूको घाउहरू पगाल्नुहुन्छ। "
जब हामी मुटुको हड्डी भाँचिएका हुन्छौं, हामीले निको पार्ने परमेश्वरको वचनमा भर पर्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचनसँग परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू छन् जसले हामीलाई कुनै पनि खतरनाक परिस्थितिहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। यो भगवान को आश्वासन छ।
भजन १ 147: the धर्मशास्त्रले हामीलाई यो बुझ्दछ कि परमेश्वर टुटे हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रलाई याद गर्नुहोस् कि ख्रीष्टले हाम्रा सबै अशक्तताहरू आफैंमा सहनुभयो र हाम्रा सबै रोगहरू उहाँले निको पार्नुभयो।
भजन 71: 20 “यद्यपि तपाईंले मलाई कष्टहरू देख्नु भएको छ, धेरै र तीतोपना, तपाईंले मेरो जीवन पुन: स्थापित गर्नु हुनेछ। पृथ्‍वीको गहिराइबाट तपाईंले फेरि मलाई उठाउनुहुनेछ। ”
यदि तपाईंलाई परास्त सूर्य फेरि उठ्नेछ भन्ने आश्वासनको आवश्यकता छ भने, बाइबलको यो अंश पढ्नुहोस्। भजन :71१:२० ले भन्छ, यद्यपि तपाईंलाई कष्ट र कठिनाइले काट्यो, तपाईं फेरि उठ्नुहुनेछ। हाँसो र खुशी तपाईं मा बहाल हुनेछ।
रोमी :8:२:28 "र हामीलाई थाहा छ कि सबै थोकहरू उहाँमा प्रेम गर्नेहरूका निम्ति भलाइको निम्ति काम गर्दछन्, जसलाई उहाँको उद्देश्य अनुसार बोलाइएको छ।"
जब तपाईलाई एक आवाश्यकता चाहिन्छ अन्तमा सबै चीजहरू राम्रो हुँदै जान्छन्, रोमी :8:२:28 पढ्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ कि दु: ख र स in्कष्टमा पनि परमेश्वर सधैं वफादार हुनुहुन्छ।
यशैया 43: 18 “पहिलेका चीजहरू बिर्सनुहोस्; विगतका कुरामा ध्यान नदिनुहोस्। ”
यो एउटा बाइबल अंश हो जुन कठिन समयको अनुभव गरेपछि चाँडो अघि बढ्न मद्दत गर्दछ। यशैया the 43:१:18 को धर्मशास्त्रले भनेको छ कि विगतका कुराहरुलाई बिर्सियौ, भूतकालमा नबिर्स। जब हामी हामीसँग विगतमा घटेका खराब कुराहरूमा ध्यान दिन्छौं त्यसले मात्र मुद्दाहरू बढाउँदछ र समाधान आउनबाट रोक्छ।
धर्मशास्त्रले सल्लाह दिन्छ कि हामी विगतका चीजहरू बिर्सन र उनीहरूमा बास नगर्न प्रयास गर्छौं।
टुक्रिएको हृदय विरुद्ध प्रार्थना
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना पोइन्ट्स जान्न र परमेश्वरको इच्छामा समर्पण गर्न
अर्को लेखमाEvangelism अघि प्रार्थना भन्नु
२०२१ मा सफलताको लागि प्रार्थना
पास्टरहरूको लागि २० युद्धका प्रार्थनाहरू